अब १४ तहको नतिजा आउन बाँकी, कहाँ कसको अग्रता ? - Everest Dainik - News from Nepal
अब १४ तहको नतिजा आउन बाँकी, कहाँ कसको अग्रता ?
काठमाडौं, असोज ८ । तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत् प्रदेश नम्बर–२ मा भएको निर्वाचनको १४ स्थानीय तहको नतिजा आउन बाँकी छ ।
२ नम्बर प्रदेशको ८ जिल्लामा १ महानगर, ३ उपमहानगरसहित १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १२२ स्थानीय तहको नतिजा अार्इसकेकाे छ । अव १ महानगरसहित १४ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस २४ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहको मतगणना सकियो
हेराैँ कहाँ कसको अग्रता ?
पछिल्लाे मत परिणाम अनुसार
संघीय समाजवादी ६१४९
लोकतान्त्रिक फोरम २२१७/२०८५
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले ३६ स्थानीय तहको प्रमुखसहितको जीत हासिल गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले २२ स्थानीय तह जित्दै प्रदेश नं. २ को दोस्रो शक्तिको रुपमा देखा परेको छ भने ४ स्थानमा लिड गरिरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले २१ स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्दै २ स्थानीय तहमा लिड गरिरहेको छ । राजपा नेपालको २१ स्थानीय तह जित्दै ३ स्थानमा लिड गरिरहेको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेले भने अहिलेसम्म १६ स्थानीय तह मात्र जितेर पाँचौ स्थानमा रहेको छ भने ३ स्थानीय तहमा लिड गरिरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस राप्रपाले खाता खोल्यो
यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ३, नेपाली जनता दलले २ र नयाँ शक्ति पार्टीले १ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ ।